House – Thet Nandar
ခွေးလေး အမွှေး ထူထူ လေးနဲ့ သန့်ပီး လှနေလို့ ဓာတ်ပုံ ရိုက်ထားတာ .. လူလည်း တော်တော် ယှဉ်တယ် … သနားပါတယ်။ သခင် ဈေးဝယ်နေတုန်း .. အပြင်မှာ ကျန်နေခဲ့တာ … အဲဒီ နား တ၀ိုက်က လမ်းလျှောက်ပီး ဈေး လာဝယ်ပုံ ရတယ်။ ကားနဲ့ ဆိုရင်တော့ ကားပေါ်မှာ ဒီကောင်တွေကို ပြတင်းပေါက်ဖွင့်ပီး ထားတာ တွေ့ဖူးသေးတယ် …. ဒန့်သလွန်သီး … တထုပ်ကို $ 1.89 ပလာတာ .. ချပါတီ … ရေခဲရိုက် ဟင်းသီး ဟင်းရွက် အမျိုးစုံ ရပါတယ် … ထက်ခြမ်းခွဲထားတဲ့ ဒန့်သလွန်သီးတွေလည်း ရပါတယ် …. ငါးခေါင်းနဲ့ […]
Read More 3.22.12 – India Grocery Store, CT